September 2020 - News36media
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on नेपालीले बनाए इन्टरनेट बिना भिडियो हेर्न मिल्ने ‘ओकेट्युव’
एकजना नेपाली युवाले इन्टरनेट बिना चलाउन सकिने ‘युट्युव’ विकास गरेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर राजेश दासले सवारी साधनलाई लक्षित गर्दै अफलाइनमा चलाउन मिल्ने ‘ओकेट्युव’ बनाएका हुन् । ‘यसमा अफलाइन बसेरै भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न मिल्छ । भिडियोका लागि हामीले कन्टेन्ट प्रदायकसँग छुट्टै सम्झौता गरेका छौं,’ दास भन्छन् । ओकेट्युवका लागि तयार पारिएको […]
सम्झनाका बुवा भ’क्का’निदै यसो भनेपछी रो’किएन अरुको आँ’सु !
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on सम्झनाका बुवा भ’क्का’निदै यसो भनेपछी रो’किएन अरुको आँ’सु !
प्रताप ओली, बझाङ – बझाङमा ब ला त्का रपछि ह त्या गरि एकी १२ वर्षिया स म्झना कामीका बुवा बिकास भारतबाट आएका छन्। भारतबाट आएदेखि बिकास चैनपुरस्थित एक सानो ब न्द को ठाभित्र छन्। जतिखेर पनि आँ खाभ रि आँ शु आइ रहन्छन्। रुँ दै भन्दै थिए ‘छोरी जन्मा उने सबै बुबा पा पी हुन् […]
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on बच्चा छोराकै भनेकी आमाले मागिन मा’फी, बच्चा छोरा नभएको प्र’माणि’त (भिडियो सहित)
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on रुसले तयार गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर नेपालमा आयो अहिले सम्मकै खुसिको खबर !
काठमाण्डौ – नेपाललाई २ करोड ५० लाख कोरोनाविरुद्ध खोप (स्पुत्निक भी)को डोज दिन रुसको स्वतन्त्र सम्पत्ति कोषल तयार भएको छ । ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्समार्फत नेपाललाई सो संख्यामा कोरोनाविरुद्ध खोपको डोज दिने रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन् । ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्स निजी स्वास्थ्य सेवा फर्म र रुसको औषधिको महत्त्वपूर्ण वितरक हो । रुसको प्रत्यक्ष लगानी कोषले विश्वभर कोरोनाविरुद्धको […]
आफ्नै फुपाजुको यस्तो घि’न’लाग्दो हर्कत, १७ वर्षिय भदैनीको पे’ट’मा ५ महिनाको बच्चा (भिडियो हेर्नुस्)
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on आफ्नै फुपाजुको यस्तो घि’न’लाग्दो हर्कत, १७ वर्षिय भदैनीको पे’ट’मा ५ महिनाको बच्चा (भिडियो हेर्नुस्)
मकवानपुरको वकैया गाउँपालिका निवासी एक १७ वर्षकी किशोरीलाई आफ्नै फुपाजुले ग’र्भ’वती वनाएपछि घटना यतिबेला सबैतिर सार्वजनिक भएको छ । फुपाजुको उमेर ६० वर्ष छ । ६० वर्षका वृद्ध फुपाजुले उल्टै किशोरीले आफुलाई त्यसका लागि आकर्षित गरेको आ’रोप लगाएका छन् । अ’नै’तिक काम गरेपछि बलवहादुर भुलले ग’र्भ नबसोस भनेर गर्भनिरोधक औषधी पनि खान दिने गरेका थिए […]
September 30, 2020 September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on गरेर खाएकाे कसैले देख्न नसक्ने कस्तो यो समाज? पोखरीमा कसैले बीष हालिदिएपछि…
बास्तवमा हामी नेपालीहरुको सोच यो सँसारमै सबैकाे भन्दा नीच र नकरात्मक नै छ भन्ने उदाहरण हाे यो । नेपालका नेताहरूलाइ गाली गरेर नथाक्ने हामी नेपाली नै सबै भन्दा खराव छाै जस्तो लाग्छ । खै नेपालीहरूकाे जन्मजात रगतमै यस्तो नकरात्मक सोच मात्रै किन आउँछ । कसैले केहि राम्रो काम गर्यो भने कसरी उस्काे बिगार्ने रिस गर्ने, […]
काकीसँग मैले नि,यमित सम्ब,न्ध दिइरहदा समेत अरुसँग पनि सम्ब,न्ध छ भनेपछि सह्य भएन, अनि सि’ध्याएँ
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on काकीसँग मैले नि,यमित सम्ब,न्ध दिइरहदा समेत अरुसँग पनि सम्ब,न्ध छ भनेपछि सह्य भएन, अनि सि’ध्याएँ
काठमाडौ । ललितपुरको चुनीखेलकी गीता केसीको लाश भेटिएपछि उनकै भतिजमाथी प्रहरीले शंका गर्यो । प्रहरीको अनुशन्धान उनकै भतिज निर्मल केसीमाथी सोझिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ परेका निर्मल विरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले सोमबार गीताकै भतिजा निर्मललाई जन्मकैदको सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उक्त […]
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतीले मागिन् डिभोर्स
काठमाडौं । माया र यु’द्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका छौ । यो बीचमा अहिले माया प्रेम सम्बन्धि एउटा घटना बाहिर आएको छ । भएको के भने, एक महिलाले विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोच बनाएकी छिन् । सम्बन्धविच्छेद किन गर्न चाहिन् ? यसको कारण भने निकै रोचक छ । उनका […]
नेपाल-इजरायलबीच श्रम सम्झौता हुँदै, यस्ता व्यक्तिले जान पाउनेछन् इजरायल !
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on नेपाल-इजरायलबीच श्रम सम्झौता हुँदै, यस्ता व्यक्तिले जान पाउनेछन् इजरायल !
काठमाडौं, नेपाल र इजरायलबीच यही असोज १४ गते श्रम सम्झौता हुने भएको छ । जेरुसेलमस्थित इजरायली विदेश मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र (अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र)मा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गाबी […]
दुःखद खबर; द’लित युवतीमाथी भएको यति ठूलो ब’ज्रपा’तबाट युवतीको मृत्यु
September 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on दुःखद खबर; द’लित युवतीमाथी भएको यति ठूलो ब’ज्रपा’तबाट युवतीको मृत्यु
काठमाडौं । भारतमा अर्को निक्कै दु:खद घटना घटेको छ । भारतको उत्तरप्रदेश हाथरसमा दुई साताअघि सि$का$र भएकी एक दलित युवतीको मृत्यु भएको छ । दिल्लीको सफदरजंग अस्पतालमा उपचारार्थ १९ वर्षीया ती युवतीको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । घटना दिल्लीबाट करिब दुई सय किलोमिटर टाढा उत्तरप्रदेशको हाथरस गाउँमा घटेको हो । […]